Brezila: fampahalalana momba ny fizotry ny dia amin'ny raharaham-barotra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Brezila: fampahalalana momba ny fizotry ny dia amin'ny raharaham-barotra
Taorian'ny nahitana vanim-potoana nitombo, ny fihemoran'i Brezila sy ny tsy fandriam-pahalemana ara-politika dia tsy teo amin'ny tsenan'ny dia an-trano ihany fa ny tsena iraisam-pirenena ihany koa. eTN dia manome an'ity lahatsoratra vaovao vaovao ity ho an'ny mpamaky miampy fandoavam-bola amin'ny fangatahan'ny mpampamoaka fanafahana.
Ny ankamaroan'ny olona teo amin'ny sehatry ny indostria dia nanoratra an'i Brezila taorian'ny taona 2016. Taorian'ny nahitana vanim-potoana nitombo, ny fihemoran'i Brezila sy ny tsy filaminana ara-politika dia nisy fiantraikany teo amin'ny tsenan'ny dia an-trano ihany fa ny tsena iraisam-pirenena ihany koa. Ao amin'ny vinavinan'ny Global Travel For 2018 (Global Travel Travel Association) (GBTA) tamin'ny taona XNUMX, dia nilaza fa "nihena io fitomboana io tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa, ary ny tsenan'ny dia an-tsena any Brezila dia mihemotra ary very ny ankamaroan'ny fotoana azo tamin'ny fiandohan'ny taonarivo vaovao."
Na izany aza, heveriko fa angamba aloha loatra ity noho ny antony telo lehibe. Ary noho ireo antony ireo dia misy ny fahafaha-manararaotra trano fandraisam-bahiny tsy miankina. Toy ny dia fitsangatsanganana, ny mpivarotra dia mitady traikefa tsy manam-paharoa sy fijanonana tsy hay hadinoina. Ny trano fandraisam-bahiny mahaleo tena dia miorina tsara amin'ny fitrandrahana ireo fironana ireo ary tokony mikasa ny hampitombo ny varotra, na dia mety hahazo tohana avy amin'ireo orinasan'ny solontenan'ny hotely aza.
1) Na dia niadana aza ny dia, dia mbola miakatra hatrany ny fironana ankapobeny. Tamin'ny 2010, 23.49 miliara dolara ny fandaniana amin'ny fivezivezena any Brezila ary tamin'ny 2016 dia 27.22 miliara dolara izany.
2) Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ao Brezila, Azul sy GOL, dia nitatitra tamin'ny faran'ny taona 2017 fa nahita fironana tsara amin'ny fangatahana orinasa avo lenta izy ireo. "Mino aho fa afaka milaza izany isika amin'ny antoka azo antoka rehefa elaela fa nahita ny fangatahan'ny orinasa izahay," hoy i Azul. "Nahazo akaiky ny fangatahana tamin'ny volana septambra izahay ary nahita izany tamin'ny volana oktobra koa." Tombanan'i GOL fa manodidina ny 70% ny vola miditra aminy dia entin'ny mpanjifa orinasa, ary ny orinasam-pitaterana roa tonta dia naminavina fa miandry fisondrotana amin'ny 2018 izy ireo.
3) Ny fangatahana fiara fanofana antenaina hitombo amin'ny taona 2018. Localiza, orinasam-panofana fiara isam-paritra, dia nanao fiaraha-miasa tamin'i Hertz, izay nahitana ny fividianana Hertz Brazil tamin'ny Q4 2016.
Mazava ho azy, miaraka amin'ireo mpandehandeha mpandraharaha maro be manidina sy fiara be manofa, tsy mora ny mieritreritra fa hijinja ireo tombontsoa ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny.
Brezila, toekarena lehibe indrindra sy maro karazana any Amerika Latina, dia nahita fampiasam-bola be tamin'ny indostrian'ny hotely tao anatin'ny folo taona lasa. Na ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany FIFA 2014 sy ny turbo Lalao Olaimpika fahavaratra 2016 dia nampidy ny sehatry ny fandraisana olona, ​​ary mbola mitombo ny fitomboan'ny isan'ireo efitrano amboarina. Nanambara fiaraha-miasa amin'ny Atlantica i Hilton hampitombo ny marika Hilton Garden ao amin'ny firenena ary ny BHG sy ny Accor Hotels dia nanambara fifampiraharahana mitentina $ 63 tapitrisa izay hahita ny Accor haka portfolio amin'ny hotely 26 misy efitrano 4,400. Ankoatr'izay dia nanambara ny fikasany ny hanokatra trano 30 eo ho eo any Brezila ny taona 2025 ny trano fivarotana Frantsay.